आठ महिनामा ३२१ अपार्टमेन्ट खरिद बिक्री, कुन महिना कति ? Properties | NepalSpace - The Largest Real Estate Marketing Portal in Nepal
आठ महिनामा ३२१ अपार्टमेन्ट खरिद बिक्री, कुन महिना कति ?
Categories: मार्केट न्युज
काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको आठ महिनामा काठमाडौं उपत्यका, पोखरा र झापामा ३ सय २१ अपार्टमेन्ट खरिद बिक्री भएका छन् । अपार्टमेन्ट स्टक सकिएको हुनाले खरिद बिक्री सानो संख्यामा देखिएको हो । ०७२ को भूकम्पपछि नयाँ अपार्टमेन्ट परियोजना आउन नक्सदा अहिले ग्राहकले चाहेर पनि अपार्टमेन्ट खरिद गर्न नपाउने अवस्था छ । अहिले धेरैजसो पुराना अपार्टमेन्ट खरिद बिक्री भइरहेको रियलटस्टेट एजेन्ट बताउँछन् ।
एक दर्जन अपार्टमेन्ट आउँदै
भूकम्पको ५ बर्षपछि पछिल्लो समय झन्डै एक दर्जन हाराहारी अपार्टमेन्ट निर्माण सुरु भएका छन् । यी अपार्टमेन्ट निर्माण सम्पन्न भएपछि एक हदसम्म आपूर्ति बढ्ने विश्वास लिइएको छ । अवास विकास कम्पनीहरुका अनुसार अहिले अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने ग्राहक भेटिए पनि स्टक अपार्टमेन्ट भेटिदैनन ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठका अनुसार भूकम्पअघि करिब ४ हजार ७ सय युनिट अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न बाँकी रहेकोमा अहिले स्टक सकिन थालिसकेको छ । ‘अहिले उपभोक्ताले अपार्टमेन्ट खोज्न थालेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, हामीसँग बिक्रीका लागि अपार्टमेन्ट बाँकी छैनन् ।’
२०७२ को भूकम्पपछि आवास विकास कम्पनी अपार्टमेन्ट निर्माण छोडेर एकल बंग्लो निर्माणमा केन्द्रित भए । त्यसैले पनि अपार्टमेन्टको स्टक सकिन थालेको हो ।
साउनमा १९ अर्पाटमेन्ट किनबेच
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार साउन महिनामा किनबेच भएका १९ अपार्टमेन्टमध्ये भद्रपुर मालपोत झापाबाट १, लगनखेल १०, डिल्लीबजार २, चाबेल ३, कलंकी २, टोखा मालपोतबाट १ वटा किनबेच भएका छन् ।
भदौमा २ अर्पाटमेन्ट किनबेच
भदौ महिनामा दुईवटा मात्र अपार्टमेन्ट किनबेच भएका छन् । भदौमा चाबेल र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट एक÷एक अपार्टमेन्ट किनबेच भएका हुन् ।
असोजमा १० अर्पाटमेन्ट किनबेच
असोज महिनमा १० वटा अपार्टमेन्ट किनबेच भएका छन् जसमध्ये ललितपुरको लगनखेल मालपोतबाट ५, चाबाहिल ३ र कलंकी मालपोटबाट २ अपार्टमेन्ट किनबेच भएका हुन् ।
कार्तिकमा १० अर्पाटमेन्ट किनबेच
अशोज महिनमा १० वटा अपार्टमेन्ट किनबेच भएका छन् जसमध्ये ललितपुरको लगनखेल मालपोतबाट ५, चाबाहिल ३ र कलंकी मालपोटबाट २ अपार्टमेन्ट किनबेच भएका हुन् ।
मंसिरमा ८७ अर्पाटमेन्ट किनबेच
मंसिर महिनमाा किनबेच भएका कुल ८७ अपार्टमेन्टमध्ये ललितपुरको लगनखेलबाट मात्र ३० वटा अपार्टमेन्ट किनबेच भएका छन् । यस्तै, डिल्लीबजारबाट १०, चाबाहिलबाट ४, कलंकी ३, टोखा ५, कास्की पोखरामा ३५ अपार्टमेन्ट किनबेच भएको विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
पुसमा ७१ अर्पाटमेन्ट किनबेच
पुस महिनामा देशभर ७१ अपार्टमेन्ट खरिद बिक्री भएका छन् । ललितपुरको लगनखेल मालपोतबाट ३३, डिल्लीबजारबाट १३, चाबाहिल ४, टोखा ११ र पोखरामा १० वटा अपार्टमेन्ट किनबेच भएको देखिन्छ ।
माघमा ६४ अपार्टमेन्ट किनबेच
माघ महिनामा बिक्री भएका ६४ अपार्टमेन्टमध्ये ललितपुरको लगनखेल मालपोतबाट ३७ युनिट, डिल्लीबजार मालपोतबाट १३ युनिट, चावहिल मालपोतबाट ८ युनिट, कलंकी र टोखा मालपोतबाट ३-३ युनिट अपार्टमेन्ट किनबेच भएका थिए । माघमा कास्की मालपोत कार्यालयबाट एउटै अपार्टमेन्ट किनबेच भएका छैनन् जबकी मंसिरमा कास्कीमा ३५ युनिट र पुसमा १० युनिट अपार्टमेन्ट खरिद बिक्री भएका थिए ।
फाुगनमा ५८ अर्पाटमेन्ट किनबेच
विभागका अनुसार फागुन महिनामा ५८ अपार्टमेन्ट किनबेच भएका छन् जसमध्ये ललितपुर लगनखेल मालपोतबाट ३१, डिल्लीबजारबाट २०, चाबाहिल २, कलंकी ४ र पोखरामा १ अपार्टमेन्ट किनबेच भएका छन् ।